फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको भाउ ? – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /News/फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको भाउ ?
फेरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको भाउ ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज घटेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ४ सयले घटेको हो ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ४ सय कायम गरिएको छ
भने तेजावी सुनको मूल्य ९७ हजार ९ सय निर्धारण गरिएको छ ।त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेकोे छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १३५५ रहेको महासंघले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको ‘रेम्डेसिभिर’ एन्टिभाइरल औषधिको प्रयोग डेडिकेटेड अस्पतालमा सुरु गरिएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको यो एन्टिभाइरल बिरामीको स्वीकृतिमा मात्र प्रयोग गरिनेछ ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार भारतका तीनवटा कम्पनीमा उत्पादित दुई/दुई हजार भाइल औषधि (खोप) ल्याउन अनुमति दिइएको छ । भारतमै समेत यो औषधिको अभाव रहेकाले प्रभावकारिताका आधारमा थप माग गरिने महानिर्देशक ढकालले बताए । नेपालमा यो औषधि सिनर्जी ओभरसिज प्रालि र यतिकेम प्रालिले ल्याउने अनुमति पाएको छ ।
अस्पतालको अति सघन कक्ष (आईसीयू)मा उपचाररत र भेन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा रहेका बिरामीमा ‘रेम्डेसिभिर’ प्रयोग गर्न पाइने महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । कोरोनाको लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई यो औषधि प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा दीपक श्रेष्ठले लेखेका छन् ।